Mike Tyson oo diidey inuu isku sameeyay qaliin asiga oo iska dhigaya haween (Layaab). - iftineducation.com
iftineducation.com – war kasoo yeeray mike tyson, ninkii qamarjiga ahaa ma ahan in uu kusoo laabtey naag ayuu fara xumeeyay laakiin Tyson ayaa waxaa laga sheekey inuu badashey ragnimadii iyo magaciisii, uu labaxey Michelle.
hadalkaasi waxaa sheekay in ninkii hore ee qaadey koobka aduunka dhanka feerka, inuu sameeyay qaliin dhanka jirka ah asiga oo iska dhigaya habeen.
waxeyna qaadadey 16 saacadood intaa oo kaliya ma ahane Tyson waxaa uu qaliin kusameeyay wajigiisa si uu uga ekaada qof dadka soo jiida.
Aqbaartaan waxaa qorey websityada qaarkamid ah wadamada Afrika magaraneyno qofka ay kasoo xigteen,websityada qorey waxaa kamid ah mid laga leeyahay Ghana iyo Zimbabwe ayaga oo cinwaan ugadhigay Tyson oo iska dhigay haween.
sheekadani waxey noqotey mida ugu Papolersan maxaa yeelay waa wax lala yaabo ayay noqotey nin feeryahan ah oo dhowr nin KO giliyay inuu noqdo feminine.
laakiin Mike Tyson ayaa iska fogeeyay iney jirta sida laga soo xigtey websitkan.
mike tyson waxaa uu dhahey.
“Aniga wali nin rag ayaan ahey oo dareemaya ragnimadiisa. Aniga waligeey maku riyoonin inaan iska dhiga haween. warka sheegaya in aan badashey ragnimadii waa been, taasna waa mid aad xeywaanima ah.
Aniga waxaan kasoo qeybgaley ciyaartii udhaxeysay Pacquiao vs Marquez dadbadan ayaana isla daawaneyni waxaana ahaan nin rag ah sideeydii caadiga ii aheyd“
wali ma aaminsan tahay in Tyson uu badashey ragnimadii.?